Global Voices teny Malagasy » Korea Avaratra: anatin’ny ady psikolojika koa ny hatsaràn-tarehy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Jolay 2010 7:34 GMT 1	 · Mpanoratra Lee Yoo Eun Nandika Candy
Sokajy: Azia Atsinanana, Korea Atsimo, Korea Avaratra, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mpitsoa-ponenana, Politika, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Lasa olo-malaza any Korea Atsimo indray izao ny mpandroso sakafo Koreana Tavaratra izay mitovy be amin'ny mpilalao sarimihetsika Koreana Tatsimo. Nahazo jery an'aliny maro ny horonantsary iray ao amin'ny Youtube, mampiseho tovovavy mpianatry ny kolejy midera ny hatsaram-panahin'ny fitondràna amin'ny fianakaviany mpanefoefo. Ireo mpitsoa-ponenana Koreana Tavaratra nankany Korea Atsimo dia milaza fa tetika fampielezan-kevitra fotsiny.
Sarin'ny mpandroso sakafo Koreana Tavaratra (havia) sy ny mpilalao sarimihetsika Koreana Tatsimo Kim Tae-hee  (havanana)
Nanomboka nalaza tamin'ny tontolon'ny fitoraham-blaogy Koreana Tatsimo ity mpandroso sakafo ity, raha nahatsikaritra ny bikany ireo Koreana nitsidika rano fisakafoanana Koreana Tavaratra tany Kambodza ary nampiakatra ireo sariny tany min'ny vohikalan-dry zareo. Avy hatrany dia nahazo anarana hoe ‘Kim Tae-hee an'ny Korea Avaratra’ ilay mpandroso sakafo noho ny endriny mitovy amin'ny mpilalao sarimihetsika Koreana Tatsimo malaza. Ireo mpampiasa aterineto Koreana sasany dia miantso azy hoe andriamani-bavy Koreana Tavaratra na ny antony hampihavanana Korea roa. Na ireo trano fisakafoanam-panjakàna Koreana Tavaratra aza dia nahasarika kely ny saina noho izy.
Ireo mpitoraka blaogy politika mavitrika kosa dia manoro hevitra ny vahoaka handalina kokoa noho izay hitan'ny maso. Ny mpitoraka blaogy NKinside dia naneho hevitra  tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ‘Miasa ho an'iza i Kim Tae-hee an'ny Korea Avaratra?’ fa ireny vehivavy tsara tarehy ireny dia mpiasa ho an'ny tsombon-tsoan'ilay mpanao didy jadona Koreana Tavaratra, Kim Jung Il.
Maro ireo trano fisakafoanana Koreana Tavaratra any amin'ireo firenena vahiny. Ohatra tsara amin'izany ny Ok-ryu Gwan any PyongYang. Manana sampana izy ireny, tsy ao PyongYang, Gaesung ary Mt. Kumgang ihany, fa any Beijing, Shanghai ary Kambodza koa. Saika amin'izy rehetra, ireo vehivavy tsara tarehy alefa avy any Korea Avaratra hikarama vola vahiny dia mandroso sakafo daholo. Misy mihitsy aza ny fanaovana mozika in-droa isan'andro, manodidina ny amin'ny 12:30 atoandro ary amin'ny 7ora hariva. Afaka miara-maka sary amin'ireo mpanjifa sy mitafa amin'ireo mpanao gazety ireo mpandroso sakafo ireo. Toa ny mandoka ny hatsaràn'ny Korea Avaratra… Ary ny ampahany betsaka amin'ny vola valin-kasasaran-dry zareo dia miditra any am-paosin'i Kim Jung-il avokoa.
Sarin'ny horonantsary avy amin'ny blaogin'i An Chi-yong, efa azo jerena.
Tsy voalohany izao i Korea Avaratra no manindry amin'ny alalan'ny fampiasàna ny hatsaràn-tarehy. Iray volana lasa izay, navoaka tao amin'ny vohikalan'i Youtube ireo horonantsarin'ny Koreana Tavaratra iray mpianatry ny kolejy manasohaso ny fitondràna ary manabaribary ny fianakaviany mpanefoefo sy ny fiainany amin'ny maha-mpanankarena azy. Ity vehivavy Koreana Tavaratra ity dia avy amin'ny Anjerimanontolom-pampianarana any PyongYang izay zanaky ny fianakavian'ny debadeba ihany no mahazo miditra ao. Nideradera izy fa ny fitondràna no nandoa ny tranony vaovao sy mijoalajoala, ary mandrabiraby amin'ny olan'ny tsy fananan-kialofana any Korea Atsimo. Nahazo anaram-bositra hoe ‘ny tovovavin-kolejy Endrik'i Korea Avaratra’ (‘endrika’ ilazana olona tsara endrika) ilay tovovavy any amin'ny tontolon'ny fitoraham-blaogy Koreana Tatsimo.
Esoeso avy hatrany no navalin'ireo Koreana Tatsimo ilay horonantsary. Ny mpitoraka blaogy Minazz99 dia nanamarika  sary ihomehezan'ny ankamaroan'ireo mpampiasa aterineto hafa, ilay tovovavy Endrika mampiasa solosaina finday amerikana HP vaovao sy ny Hangul, rindram-baiko fanoratana vita Koreana Tatsimo, vokatra avy amina firenena roa lazain'ny fitondràna Koreana Tavaratra ho ilay fahavalom-panjakàna sy ilay governemanta mpamadika.
Mihamafy ny tsikeran'ny mpampiasa aterineto momba ilay tovovavin-kolejy Endrik'i Korea Avaratra mampiasa solosaina finday amerikana. Ireo mpampiasa aterineto nijery ny sary dia nanamarika ny (esoeson'ny) fampiasàna solosaina finday amerikana raha manameloka ny Etazonia ho fahavalo mahafaty ary naneho hevitra tamin'ilay horonantsary fa endrika hafa amin'ny fomba fanaovan'ny Korea Avaratra fampielezan-kevitra izay nalaza tany amin'ny taona 1970 tany.
Manampy fanazavàna lalina amin'ity tranga ity koa ny mpitsoa-ponenana Koreana Tavaratra iray monina any Séoul. Nanoratra i Jang Jin-sung tao amin'ny blaoginy  fa nanomboka tamin'ny nifehezan'ny Korea Avaratra ny fiakanjo sy taovolon'ny tsirairay, ireo “mpitsikilom-panjakana” tsy maintsy miditra any amin'ny fiaraha-monina Koreana Tatsimo ihany no mahazo manao ny fiakanjon'i Korea Atsimo. I Jang dia niasa ho mpitantsoratra tamin'ny Antokon'ny mpiasa mitondra an'i Korea Avaratra nialoha ny nifindrany tany Korea Atsimo tamin'ny 2004. Namotopototra ity hetsika Koreana Tavaratra ity ho tetika hanatsaràna ny endriny taorian'ny tranga tany Cheonana izay namoizana aina tantsambo Koreana Tatsimo 46 i Jang.
Ny antony iahiahiako azy ho “mpitsikilom-panjakana” an'ny Kintana Avaratra dia ny taovolony. (Kintana Avaratra no anaran'ny Departemantan'ny asam-pitsikilovana any Korea Avaratra) Any Korea Avaratra mihidy ara-piaraha-monina, raisina ho fanehoana ny fironana ara-politikan'ny olona ny fomba fiakanjony sy ny taovolony. Miavaka fa ny olona atao fitaovana amin'ny fampielezan-kevitra ihany no afaka mampiseho ireo endrika manivaka ao amina fiaraha-monina voafehy toy izao…. Noho izany dia ireo mpiasan'ny Kintana Avaratra avy amin'ny Biraon'ny Fampihavanana an'ny Antokon'ny mpiasa ihany no manana alalana hanaraka ny lamaody Koreana Tatsimo amin'ny taovolo, fomba fiakanjo ary fomba fiteny… Mino aho fa ny Biraon'ny Fampihavanana an'ny Antokon'ny mpiasa dia manandrana ny manadio ny endrika mampihorohoro ananan'ny Korea Avaratra amin'ny alalan'ny ady ara-tsaina amin'ny hatsaràn-tarehy.
Raha manandrana manakaiky moramora ny fitondràna Koreana Tavaratra, tsy mitsahatra ny mipoitra kosa ny endrika ratsin'ny toekarena Koreana Tavaratra sy ny fahasalamàny. Ny tokony ifantohan'ny governemanta dia ady amin'ny hanoanana fa tsy ady ara-tsaina amin'ireo fahavalo any ivelany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/07/24/7421/
 mpilalao sarimihetsika Koreana Tatsimo Kim Tae-hee: http://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Tae-hee
 Ny mpitoraka blaogy NKinside dia naneho hevitra: http://nkinside.com/140110539444
 Ny mpitoraka blaogy Minazz99 dia nanamarika: http://blog.naver.com/minazz925?Redirect=Log&logNo=110087643360
 Nanoratra i Jang Jin-sung tao amin'ny blaoginy: http://blog.daum.net/nkfree/7513636